I-Logitech Yazisa amaqhosha e-POP, i-POP Mouse kunye ne-Logitech Desk Mat | ndisuka kuMac
ILogitech yazisa amaqhosha ePOP, iPOP Mouse kunye neLogitech Desk Mat
Ifemu yeLogitech yenye yezona ziyaziwa ngokuhambelana nezixhobo zazo zonke iintlobo, zombini kwiimveliso ze-Apple kunye nezinye iimveliso kwimarike. Zizo ezi Iimveliso ezintsha zeLogitech Studio ezisa isimilo, uvuyo kunye nobuntu kumsebenzi wesiqhelo.
Eli xesha limalunga izixhobo zokusebenza kunye noyilo oluqhelekileyo enika umsebenzisi inkangeleko ebonakalayo yobutsha kunye necwecwe. Iqukethe imouse, ikhibhodi kunye neqhosha le mouse. Ikhibhodi entsha ye-Logitech POP Keys isebenza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza, i-macOS, iWindows, iOS, ipadOS, Chrome OS kunye ne-Android. Kwimeko yePOP Mouse, iyahambelana neMacOS, Windows, iPadOS, Chrome OS kunye neLinux.
UArt O'Gnimh ngokwakhe, USekela Mongameli woBuchule kunye neMveliso kwiLogitech kuboniswe kumboniso weemveliso ezintsha oku kulandelayo:
I-Logitech's Studio Series imele imvelaphi yomntu ngamnye wethu. Ngezitshixo ze-POP kunye ne-POP Mouse senze iimveliso ezintsha ezijolise ekuchazeni njengabasebenzisi bethu, ezinobuntu obukhulu kwaye ngaphandle kokubeka esichengeni imveliso.
I-POP Keys ibandakanya izitshixo ze-emoji ezisibhozo ezinokutshintshelwa kwibhokisi - ezine kwikhibhodi ngokwayo. Zingenziwa ngokulula ngokukhetha i-emoji oyithandayo okanye ngeLogitech Options software, efumaneka njengokukhuphela okulula kwePC okanye iMac. I-POP Mouse ikwabonisa iqhosha eliphezulu elivula imenyu ye-emoji kwaye inokwenziwa ngokwezifiso ukuze ikhululeke ngakumbi.
Ikhibhodi ye-POP enesitayile se-retro ibonelela ngezitshixo ezikhululekileyo zoomatshini ezikhumbuza umatshini wokuchwetheza kunye neempawu zesizukulwana esilandelayo. Iindlela ezimfutshane zayo ze-FN ezili-12 ezitsha zinezitshixo zokuthatha isikrini, ukuthulisa imakrofoni, kunye nemiyalelo ye-par.ukuququzelela ezona zenzo ziqhelekileyo zemihla ngemihla. Ngale khibhodi intsha, amava okuchwetheza aphantse abe likhoboka lombulelo kwizitshixo zoomatshini ezinikezela ngentuthuzelo ngenxa yobume bazo obungqukuva.
Intle kwaye icwengile, iPOP Mouse ibonakala ngokuphatheka kwayo. Ikuvumela ukuba usebenze naphi na ngemveliso ephezulu ngenxa yevili layo lokuskrola leSmartWheel elitshintsha ngokuzenzekelayo ukusuka kwimowudi echanekileyo ukuya kuskrola ngokukhawuleza. Umzimba wayo ogudileyo, owenziwe ngentuthuzelo engqondweni, ungena ngokugqibeleleyo entendeni yesandla sakho ukukunceda ukuba usebenze ngcono. Ifumaneka ngemibala emininzi eqaqambileyo ukuqaqambisa umsebenzi wakho wesiqhelo, iPOP Mouse ibonelela ngoyilo olunemibala nolonwabo olunceda ekudaleni indawo edlamkileyo neyobuqu yedesktop.
Izitshixo ze-POP kunye ne-POP Mouse lulongezo lwamva nje kuthotho lweStudio yeLogitech. Ingqokelela ekwabonisa imowusi yePebble encinci, iK380 kunye neekhibhodi zeMK470, kunye neLogitech Desk Mat entsha.
Izitshixo zePOP, iPOP Mouse kunye ne Logitech Desk Mat ziya kufumaneka eSpain ngoJanuwari 2022 logtech.com nakwabanye abasasazi behlabathi jikelele. Ixabiso lentengiso elicetyisiweyo yi-€99,99 ye-POP Keys, i-€39,99 ye-POP Mouse kunye ne-€19,99 ye-Logitech Desk Mat.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » ILogitech yazisa amaqhosha ePOP, iPOP Mouse kunye neLogitech Desk Mat
Ukukhanya okutsha kweLogitech Litra, iqabane elifanelekileyo labadali bomxholo
I-iMac Pro inokubandakanya iprosesa yesine ye-M1 kunye ne-CPU ye-12